China Capsule tavoahangy PET Mena orinasa sy mpanamboatra | Qianduo fonosana
1. Ny famolavolana ny tsindrona mitsivalana mitsangana dia tsy manome antoka ny tsy fitoviana sy ny fahamendrehan'ny rindrin'ny fantsom-boaloboka sy ny kalitaony, fa miantoka ihany koa ny fanoherana ny fatran'ny haavon'ny tavoahangy, ny fahombiazan'ny famehezana, ny fisehoana avo lenta ary ny tanjaka ara-batana sy ara-mekanika.
2. Anisan'izany ny tavoahangy fivarotana be indrindra eran-tany, hanafohezana ny fe-potoana famenon'ny tsenan'ny zava-mahadomelina.
3, tavoahangy fonosana kapsula manokana amin'ny fiantohana manokana, famolavolana ary famokarana fonosana mifanaraka amin'ny paikadin'ny marikao.
4. Ny firafitry ny famehezana manokana dia manome antoka fa tsy misy famoahana.
Fepetram-pifidianana tavoahangy PET
1. famehezana ny satrony tavoahangy, permeability etona rano. Ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fahamendrehana hamandoana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitoniana amin'ny famahana;
2. Kalitaon'ny tavoahangy plastika. Manaova fanadihadiana momba ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny fenitry ny kalitaon'ny vokatra ataon'ny mpanamboatra hamaritana raha ilaina izany. Ny orinasan-tavoahangy plastika ara-panafody dia tokony hamolavola ny fenitry ny orinasa avo kokoa noho ny fenitra nasionaly, ary ny fenitry ny indostria dia tokony ho hentitra kokoa;
3. Safidio ny akora fototra amin'ny tavoahangy plastika sy ny endrik'ireo zavatra ampiana: ny fenitry ny tavoahangy amin'ny tavoahangy plastika mafy dia azo ampiharina amin'ireo akora fototra, ary tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana tsy misy poizina, tsy misy fofona, sns., Satria maro akora fototra, izay mila fidiana ho fampisehoana ankapobeny ny akora. Ny takelaka amin'ny ankapobeny dia mampiasa polyethylene avo lenta, tavoahangy polypropylene, toy ny tavoahangy PET, izay azo ampiasaina hitakiana mangarahara sy fanatanterahana sakana tsaratsara kokoa amin'ny tavoahangy penina, amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny famolavolana fanafody polypropylene na tavoahangy polyethylene ester ho akora fototra;
4. Fahamafisana sy fampifanarahana ny tavoahangy plastika. Rehefa mampiasa tavoahangy plastika dia tokony hatao ny fanandramana zava-mahadomelina mialoha mba hahitana ny fahamarinan-toerana sy ny fiampangana ny fifanarahana eo amin'ny tavoahangy plastika sy ny zava-mahadomelina. Ny fidirana ifampiresahana, ny famongorana, ny adsorption, ny fihenan'ny simika ary ny fahamaotiran'ny tavoahangy plastika zava-mahadomelina dia azo faritana amin'ny fahitana ara-tsiansa;
5. Rafitra fiantohana kalitao.
Teo aloha: Capsule tavoahangy PET Green
Manaraka: Capsule tavoahangy PET mangarahara